Echo - Egwu Green Mountain nke Oge A | Achọpụtara nke ọma
Home » Ndepụta » Echo - Ugwu Green Modern
Sq Na: 5880
Adịghị ebi ndụ na Green Green Modern nke Ụlọ Ahịa
Ha na-ekwu okwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe ha na-ele onye na-elekọta ya na-akwadebe nri abalị - onye ọrụ nri site na ọrụ, ọ bụ naanị ngwa kacha mma ka a na-ahapụ na kichin a. Ụyọkọ ndị ọbịa na-enwe oghere ọkụ n'ime nnukwu ụlọ ma ọ bụ n'elu oghere ekpuchi. Ha na-ejikọta ọnụ, na-ele anya ma na-ahụ maka ihe osise na-enye ndụ na mgbidi. Onye ọ bụla na-emetụta echiche ya, ebe ọwụwa anyanwụ nke ọwụwa anyanwụ na-eche ihu.
Echo, ugwu ugwu nke oge a, na-echere ndị nwe ya.
Ha ga-abụ ndị na-ahụ nri na ndị na-ahụ maka nkà. Ha ga na-atụ egwu mgbe anyanwụ dị egwu, na-enwe ekele maka oke ikuku nke ugwu na ihe kariri ihe ọ bụla, ha ga-eche na ha na-echefu nchefu n'ugwu.
N'ihe gbasara 10 nke onwe, Echoro na Echo na nso nso a na-enye vistas ugwu ugwu 180.
Ihe ole na ole n'ime ihe ndị a na-agụnye igwe nri nke onye isi nri na $ 51,500 nke ngwa ngwa-eji - Sub-Zero na Wolf, osisi acacia a na-egbuke egbuke na ụlọ dị iche iche, ụlọ ezumike dị oke mma nke ụtụtụ na ụtụtụ na-ekpo ọkụ, a $ 7,200 German Groke nbata ụzọ, a na-ekpo ọkụ okpomọkụ na ikuku nke 130,000, na ọkụ ọkụ gas n'ime na.
Enweghi ike ibighachi ma nyochaa na ihe karịrị $ 1,240,000. Na 95% zuru oke, gbakwunye ihe ịchọ mma omenala gị. Enwere ike ịkewaa ala ahụ ozugbo ma nwee ebe mara mma nke mara mma nke dị ka ọkara ala elu ahụ ebe a ga-ewu ụlọ ọzọ.
Naanị 12 nkeji gaa na I-40, 25 nkeji gaa Waynesville, na 40 nkeji gaa Asheville.
Atụmatụ nke Ụlọ Osisi Ugbo A Oge A:
Ụzọ mbata: Ulo oru 4'x9 na-acha uhie uhie '' German Groke 'na-akpọbata gị n'ime oge a.
Nnukwu Ụlọ: Ụlọ ezumike na-emeghe oghere na 22 ft plailings, ụlọ osisi acacia, nnukwu iko mpempe akwụkwọ, tinyekwara ntanetị 9, oghere ndị na-egbuke egbuke na-enye echiche Smoky Mountain dị egwu.
Ime ụlọ erimeri: Atụmatụ nke imeghe ihe ngosi na-eme onwe ya ka ọ na-atọ ụtọ n'ọtụtụ buru ibu. Mgbidi windo abụọ na oghere patio nke 8 na-eme ka e nwee oghere n'èzí.
Nri: Ebe nchekwa nke Chef na-agụnye ụlọ arụrụala omenala, ebe a na-ede akwụkwọ Caesarstone, na ihe ndị dị n'okpuru Sub Zero / Wolf ngwa ngwa na-efu ihe karịrị $ 51,000; gụnyere 48 "gri n'ihu friji, 48" (4) na-ere ọkụ gas dị n'elu France, ihe ndozi refrigerated, igwe onyonyo drawer, icemaker, na friji n'okpuru counter.
Egwu: Gụnyere 2nd Igwe nkuzi electrolux, mmiri ọkụ, mkpofu ihe mkpofu, na ihe mkpofu zoro ezo.
Uzo ozo kpuchie: Nwee 180-degrees nke echiche ugwu ugwu dị ogologo. Mezue igwe di iche iche na ikpo igwe. Enwere ike iji ya dị ka ihe owuwu ụra na-ehi ụra, iri nri n'èzí ma ọ bụ ikpo ọkụ ọkụ na-anụ ụtọ. A na-edozi oghere oghere ndị dị na ya na Ịtali nke a na-ahụ maka eriri igwe.
Master Retreat: Ebe dị larịị na-ezoro ezo na nsọtụ nke ụlọ ahụ. Kewapụ ya na ya na-agagharị-n'ime ụlọ dị njikere maka aka aka gị - ụlọ na-ekpuchi ọnụ ụlọ / ebe a na-amụ ihe / ime ụlọ. Ọnụ ụzọ patio nke dị mita asatọ na-eduga n'èzí ahụ. Teta na ọtụtụ ugwu ugwu.
Morning Kitchen: Ụlọ mmanya na-edozi na Subzero refrjiraeto, nke a na-akpọ Caesarstone.
Master Bath: Nnukwu Spa-dị ka bath bath nke na-egosi ije gburugburu ịsa na isi mmiri mmiri na 8 ahụ sprays. Ala a na-ekpo ọkụ na ebe dị jụụ na-eme ka mmadụ nwee ike izuike mgbe ogologo ụbọchị njem.
Suite Suite: Ụlọ elu nke ụlọ elu na-ekpuchi ya na batrị zuru ezu ma na-eje ije-na kọlọtọ & ụlọ osisi dịka anya.
Ulo elu: Dezuo saa zuru ezu, ihe mgbochi mmanya, na ihe ndozi nke Subzero refrigerator. Akwa maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ihe osise, ụlọ ntụgharị uche ma ọ bụ ime ụlọ.
Flex Ụlọ: Ngwurugwu zuru ezu zuru ezu na ịsa ahụ zuru oke ma na-eje ije-na kọlọtọ, dị njikere maka atụmatụ omenala gị; zuru okè maka ụlọ egwuregwu, ụlọ ihe nkiri, ebe ị na-aga ele, ma ọ bụ ụlọ nke nwere ike ịbata 4-5 akwa akwa.
Ụlọ mmanya: Tinye ọhụụ gị na imewe ịke ọnụ maka ala-na-ụlọ mmanya nchekwa.
Ngwa ụlọ: Ime ụlọ na ebe ị na-ahụ ọkụ, golf, skis, snowboard, nhazi ma ọ bụ ogbako.
Nkịtị Saa: Awụpụ iche dị njikere maka tile n'ime okpuru ulo iji chebe nkịta gị ma ọ bụ ngwa gị.
Ụlọ Nche: Ebe nchekwa na mgbidi na mgbidi.
Green Atụmatụ: Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ na ikuku na-efu $ 130,000, Icynene na-ekpuchi nkuzi mmiri, windo nke dị na WinDoor kpakpando & ọnụ ụzọ windo, 60 "ọkụ ọkụ ọkụ na ike ịrụ ọrụ nke ọma na American Standard / Moen bathtures. Abụọ Noritz tankless mmiri heaters njikere ka arụnyere.
Special Akụkụ: Mgbidi na mgbochi na-agbanye na isi ihe maka eserese ma ọ bụ ihe osise. Igwe na-eme omenala n'ime ụlọ iri ihe.
Ahịa: $ 799,900
Okwu: 326 na-ama mkpọtụ okporo ígwè Wolf
Afọ Wuru: 2014
Ụkwụ Square: 5880
Ụlọ ịwụ ahụ: 4
mputa: Nkume na Hard Stucco
Ntọala: Osisi Acacia na Ihe
Oke Lot: Ụlọ ọrụ 10
Ihe omimi: Ogologo Ugwu Ogologo
Nke gara agaEbube - Ụlọ ụlọ maka ire ereIhe na-esoteỤlọ elu Ụlọ elu nke elu-igwe maka ire ere - Atụmatụ dị mma